ရွာ့စာအုပ်လေး အားပေးစေချင် (MG Souvenir) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ရွာ့စာအုပ်လေး အားပေးစေချင် (MG Souvenir)
Posted by padonmar on Jul 24, 2013 in Best Web Awards, Classifieds, Personal Ad., Creative Writing | 58 comments
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်မှာ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရလေးကတော့ ရွာသူလေး Green Rose ကြိုးစားထားတဲ့ ရွာ့စာအုပ်ပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ မန်းဂဇက် ချစ်သူများရဲ့ အကြိုက်ဆုံး စာမူ ၁၁ ပုဒ်နဲ့ အချစ်ဆုံး ကဗျာလေး ၃ ပုဒ် ပါပါတယ်။
ရွာသူားတွေရဲ့ စုပေါင်းလှူဒါန်းထားတဲ့ အလှူမှတ်တမ်းတွေ ပါပါတယ်။
ရွာ့လူငယ်လေးများရဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ်လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါပါတယ်။
ရွာသူားတွေရဲ့ စုစည်းမှု အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါပါတယ်။
ရွာသူားတွေ ဘယ်လိုပင် ကလော်ဆဲကြသော်လည်း အားလုံးရဲ့ရင်ထဲက အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သူကြီးရဲ့ အမှာစာလည်းပါပါတယ်။
စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ဖို့တွက် နီးစပ်ရာ ရွာသူားတွေ စုပေါင်းစိုက်ထုတ်ပြီး အမှတ်တရ စာအုပ်လေး ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ရောင်းရတဲ့ငွေကနေ Green Rose စိုက်ထားတဲ့ အရင်းထက်ပိုသမျှကို ရွာသူားတွေ အကျိုးရှိမယ့် နေရာမှာ သုံးမှာပါ။
နောက်တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ၊ဆုပေးပွဲကို ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင် လုပ်ဖို့၊ဆုအမျိုးအစားတွေ တိုးတက်ဖို့၊
နောက်ထပ် အမှတ်တရ စာအုပ်တွေ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ဖို့ ……..စတာတွေ အတွက်သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသူားများ ချစ်ကြတဲ့ ဂဇက်ရွာ တိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက်
ဂဇက်ရွာရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရလေးတွေလည်း သိမ်းထားလို့ရ၊
သုတရသ စုံလင်တဲ့ အရေးကောင်းအတွေးကောင်း ပို့စ်လေးတွေ ကဗျာလေးတွေလည်း
(2)စွယ်တော်ရွက်-စွယ်တော်ရွက် လျှပ်စစ်သင်တန်း၊ကမာရွတ်၊ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်အနီး၊Daisy မိတ္တူဆိုင် အပေါ်ထပ် ၊အင်းစိန်လမ်း
(3)ပန်ထူးသာ သင်္ကန်းတိုက်-S9,ပန်းလှိုင်လမ်း(ဟုမ်းလမ်းဘူတာအနီး) စမ်းချောင်း
19 လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဒေါင့်
တန်ဖိုးကတော့ တစ်အုပ်ကို ကျပ် ၂၅၀၀ ပါ။
ရွာ့စာအုပ်ကျောဖုံးက ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းရဲ့ မုဒိတာ စကား
ရွာ့ ဆယ်လီဘရစ်တီတွေရဲ့ လက်မှတ်တွေ(ကြွားထှာ)
မာတိကာ နဲ့ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း
အမှတ်တရ ပုံတွေ အမြည်းပေးမယ်
အာတီဒုံ .. ကျော့် သူငယ်ချင်း ကျပ်မပြည့်တဲ့ ဒါ့ပုံဆြာ တယောက် လွှတ်ပီး ၀ယ်ခိုင်းဘာ့မယ်…
ကျော်.. shee ဆီ ပို့မလို့ …
ဒချိ .. ဒချိ..
ဆုရတဲ့သူတွေကို လက်ဆောင် ၁အုပ်စီပေးပါတယ်။
တရှီးရှီးနဲ့ ညှီနေပြီး ရွာကို လှည့်မကြည့်လို့ မပေးတော့ဘူး။
ဒဏ်ခပ်တဲ့အနေနဲ့ ၁၀အုပ် ၀ယ်အေ။
ဆယ်အုပ်တော့ မ၀ယ်ပါရဇီနဲ့ …အာတီဒုံရယ်..
ကျော့်မှာ ရှီး တယောက်ပဲ ရှိတာရယ်…
ဂနေ့ညနေ ..အဘဖော သင်္ဘောတက်စီးဖူးတဲ့
သူငယ်ချင်းတယောက် စာအုပ် လာဝယ်မယ် ဖြစ်ပါဂျောင်း…
(အူးလေးဗိန်းညားကို သား အားယီးခြစ်ဒယ် မေမေ)
ဘယ်နေရာကနေ ၀ယ်မလဲတော့ ကျော်လည်း မသိပါ..။
ရွာကို သဒိရဘာဒယ် အာတီဒုံရယ်… နောက်နှစ်ကျမှ..
ရှီး နဲ့တူတူ …
ဂနေ့ ညနေ ..အဘဖော သင်္ဘော တက်စီးဖူးတဲ့
သူငယ်ချင်း တယောက် စာအုပ် လာဝယ်မယ် ဖြစ်ပါဂျောင်း…
( အူးလေး ဗိန်းညားကို သား အားယီးခြစ်ဒယ် မေမေ )
ရက်စက်ပါပေ့ ဂီဂီ ရယ် ။ အခုမှပဲ သိတော့တယ် ။
နင်ပြောတဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ဒါ့ပုံဆြာ ဆိုတာ ၊ အဘ Cadet လေးကို ပြောတာကိုး ။
ဒီလောက် မျိုးရိုးကောင်း ရုပ်ချော စိတ်ကောင်း ရှိတဲ့ လူပျို သင်္ဘော အရာရှိလေးကို ၊
မဝေလက်ဆောင်ပေးလို့ ရလိုက်ပါတယ်။ နောက်တခါတွေ့ဆုံပွဲကို တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အန်တီဒုံ။ ဒီတခါကတော့ ရက်ကြပ်ကြီးဖြစ်သွားလို့။ တကယ်ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမှမရဘူးဖြစ်သွားတယ်။
ရွာသူားတွေဆိုရင်တော့ ၀ယ်သွားရင် ဘယ်သူပါလို့ ပြောသွားပေး
အမပဒုံမ္မာရေ ရွာသူား မန်ဘာဝင် မဟုတ်လည်း လိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ကော ရောင်းလားဟင်!
ကျွန်တော်စိတ်ကူးကတော့ ဒီစာအုပ်လေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာပေမြတ်နိုးသူတိုင်းရောင်းသင့်တယ် ထင်တာဘဲလေ။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေပါနေလို့ ပြောရခက်နေတာ။
Member မဟုတ်ပဲ ဒီစာအုပ်လေးအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်တစားရှိတယ်ဆိုတာကို ကြားရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
အဲဒီ့စာအုပ်လေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေစေချင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးထားတာခြင်းအတူတူဆိုရင်လည်း ကိုယ့် ရွာသူားတွေကိုပဲ ဦးစားပေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း စာအုပ်အရေအတွက်က member အရေအတွက်ရဲ့ 5% တောင်မရှိပါဘူး။
အဲဒီ့တော့ Green Rose တို့ရွာအတွက် အရေအတွက် တစ်ခု သတ်မှတ်ပြီးချန်လိုက်ပါမယ်။ အခု ကိုခင်ခပြောသလို member မဟုတ်ပဲ စာအုပ်လေးကို စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းဝယ်ယူနေသူတွေ အတွက် စာအုပ်အုပ်ရေ သီးသန့်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးရောင်းပေးပါ့မယ်ရှင့်။ နီးစပ်ရာ၊ အဆင်ပြေရာနေရာကနေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်လို့……..
မဆူးဆီမှာ လာဝယ်မယ် …
အနော် ဝယ်ပြီးပြီ အာတီဒုံ။
စပိုင် နဲ့ ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ။
ဖတ်ချင်လို့ ငှားတာ ကျွန်တော့ကို တစ်ယောက်မှမငှားပါဘူး… လူဇိုးတွေ…
ရွာ့သံယောဇဉ်နဲ့ ဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားထားတဲ့သူရှိလို့ ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်လာတာ။
နောင်ဒီစာအုပ်မျိုးထပ်မံပေါ်ပေါက်လာအုံးမလားဆိုတာ မသေချာတဲ့အတွက် အမှတ်တရ သိမ်းထားသင့်ကြတယ်နောာာာာာာာာာာာာ
မလာရင်တော့ ကယွဲစီနဲ့ နပန်းချခိုင်းမယ်။
စာအုပ်ဖတ်ပြီး ရွာသူလေး Green Rose ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ချီးကျူးမိပါတယ်…
ဆရာအောင်သင်းက စာတစ်ပိုဒ်ချင်း အတွက်အမှာလေးတွေလဲရေးထားပေးပါသေးတယ်..
စာကောင်းတစ်အုပ်မို့ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ ထပ်ဆင့် ကြော်ငြာ လိုက်ရပါတယ်…
ရောင်းမည် မ၀ယ်လျှင် ဇွတ်ရောင်းပါမည်
2500 ကျပ်ဆိုတာ 1500တန်ဖုံး မဖြစ်မနေပြောပေးရတဲ့ တစ်လစာဘဲရှိပါကြောင်း။
ရန်ကုန်မှာဝယ်ထားသူ ရွာသူားများကိုလဲ ဇွတ်ထပ်ရောင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဒီကနေ့ မိဗုံအမေရိကားကို ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
သားလည်း စာအုပ် တစ်အုပ်လောက် လိုချင်တယ်… ဘလိုလုပ်ရမလဲ..
နေပြည်တော်မှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ သားသားကို ပစ်ထားတယ်..
အဲဒိစာအုပ် အထု ရမှ ကျေနပ်မယ်… ဗျဲျဲျဲျဲျဲျဲျဲျဲ….
(တွေ့ဆုံပွဲ မတိုင်ခင်က အကြံမပေါက်လိုက်ဘူး.. သားဖို့ စာအုပ်တစ်အုပ် ချန်ထားပေးပြီး ပွဲတတ်တဲ့ ရွာသူားတွေကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားလိုက်ရမှာ.. ဟင့် ဟင့်)
ဘယ်နှစ်အုပ်ယူမလဲ.. ချန်ထားပေးပါ့မယ်။ နေပြည်တော်လူကြုံတွေရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ရောက်မှ ယူမယ်ဆိုလည်း သိမ်းထားပေးပါ့မယ်။
လူကြုံ လွယ်လွယ် အဆင်ပြေမယ်ဆို တစ်အုပ် ယူချင်တယ်…
တကူးတက ဖြစ်နေမယ်ဆိုလည်း ချင်ထားပေးပါဗျ
လူကြုံ အဆင်ပြေလားဗျ… စာအုပ်မျှော်နေပါတယ်နော်..
(အမတ်မင်းကြီးတော့ နေပူတော်ရောက်နေတာ … သူလာမယ်မှန်းမသိလိုက်ဘူးဗျာ)
နောက်တစ်ကြိမ်ကျမှ ရောက်အောင်လာပြီး လက်မှတ်တွေယူတော့။
အလင်းဆက်၊အံစာနဲ့ သဂျားခမျာလည်း လက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလုပ်ပြီး လာတဲ့လူတိုင်းကို လက်မှတ်ဒမြတိုက်နေရတာ လက်မလည်ဘူး။
စာအုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား ပေးသူများ ရော၊ စာမူဖော်ပြခြင်းခံရသူများ အတွက်ကိုပါ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီလို ရွာ့ ရင်တွင်းဖြစ် စာအုပ်လေးတွေကို နောင် အကြိမ်ပေါင်း များစွာ မြင်နေရတော့ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်မအတွက် စာအုပ်လေးတစ်အုပ် တော့ ချစ်အစ်မဒုံ သိမ်းပေးထား တယ် လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ထားပါကြောင်း။
မလတ်နဲ့ အဘဆွေတွက် လူကြုံရှိရင် ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။
သများ လေးအုပ်ထပ်ဝယ်ပါမီ။ မန်းဂဇက်မန်ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့
အလှူရှင်တွေကို ရွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့ … ဟိ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လ – ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲမတိုင်မီကလဲ
အဲဒီအကြံကို ကို ဘလက်ချောက စပြီး အဆိုပြုတာပါ…။
အဲဒါကို ကျုပ်က မထောက်ခံ ခဲ့ပါဘူး…။
အခု ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲ မတိုင်ခင် ရှေ့ပိုင်းမှာကတည်းက
၁- မလွယ် လို့ ပါ..။
၂- စိုက်ထုတ်ရမယ့် ငွေကြေး များလို့ ပါ..။
မပဒုမ္မာက လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ပြီး Green Rose က အစအဆုံး စာအုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံကိုလဲ စိုက်သုံးထားပြီး လိုသမျှ သူချည်း စိုက်မယ် လုပ်ပါတယ်။
မနေသာတဲ့ အဘဖေါနဲ့ မပဒုမ္မာက ၀ိုင်းကူလို့ စိုက်ရတာလျော့သွားတာပဲကံကောင်း…။
တကယ်ဖြစ်အောင် အတင်းလုပ်တော့ ဖြစ်သွားပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုထိ ရလာတဲ့ ရလာဒ်တွေ
လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံး ဟာလဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ဖြစ်လာတာပါ။
မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်စရာရှိတာလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူကြီးလူငယ်များရဲ့ ရဲရင့်တက်ကြွမှု့ကို
ရှေ့ခရီးအတွက်လဲ တကယ်ကို စိတ်ချလက်ချ ဖြစ်မိပါကြောင်း………
တကယ်တော့ စာအုပ်ဝယ်တယ် ဆိုတာထက်
ဂဇက်အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စိုက်ထုတ်ထားရတဲ့ ငွေကြေးတွေအတွက်
မိမိ တနိုင်တပိုင် ပါဝင်စိုက်ထုတ်တယ်… လို့ သဘောထားကြစေချင်ပါတယ်။
အခု မပဒုမ္မာ စိုက်ပေးတဲ့၊ အဘဖေါစိုက်ပေးတဲ့၊ Green Rose စိုက်ပေးထားတဲ့ ငွေပမာဏတွေဟာ ယာယီလို့ပဲ မှတ်ယူပါတယ်။
နောင် ၆ လ မှာ နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲမှာလဲ ထပ်ရောင်းသင့်ပြီး အဲဒါပြီးတော့မှ
အဲဒီအခါမှာ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပါဝင်ပါမယ်။
အခုက သူများအတွက်ကျန်အောင် ၁၂ အုပ်ပဲဝယ်ထားပါတယ်။
နောက် တွေ့ဆုံပွဲမှာ များများစားစားကျန်သေးရင် နောက်ထပ် ၁၂အုပ် စာ အော်ဖါလုပ်ပါကြောင်း…..။
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတဲ့“နောင် ၆ လ မှာ နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲမှာလဲ ထပ်ရောင်းသင့်ပြီး အဲဒါပြီးတော့မှ
တကယ်အပြီးစိုက်ထုတ်လိုက်ရမယ့်ပမာဏထွက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပါဝင်ပါမယ်။´´ ဆိုတဲ့ စကားရပ်လေးကိုတော့ သဘောကျမိပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော်ကိုလည်း လက်တို့ပြီးတော့ ပြောပါအုံးဗျာ ဦးပါရေ။
ဘူဒွေ ဘာပေါပေါ ..
ကျုပ်ဒေါ့ ဝယ်ပီးတွားဘီ …
လက်မှတ်တွေတောင် ပါသေး … ဟေဟေ့ ..
Now အီခု .. ဒီလက်မှတ်တွေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်စားရင် ကောင်းမလဲလို့ စင်းဇားနေဒါ …
အမှတ်တရ လက်မှတ်များကို လေလံတင်ရန် စဉ်းစားနေပါကြောင်း
အယ်…အခုမှ အန်တီ့စာအုပ်ကလေးကို သေချာပြန်ကြည့်မိတယ် ။
ကျွန်တော် က အန်တီ့ စာအုပ်လေးနဲ့ 
အင်းလေ..ကျွန်တော်က.. ရွာ့ ဆယ်လီဘရစ်တီ တစ်ယောက်တော့လည်း..
ရွာသူားတစ်သောင်းလောက်မှာမှ ဆုရတဲ့လူဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတာမို့………
ရွာ့ဆယ်လီဘရစ်တီ မဟုတ်တဲ့ ရွာ့ကျော်ကြားသူ (အကယ်ဒမီဆုရှင်ကြီး) အလင်းဆက်ဆီက လက်မှတ်ကို လိုချင်ပါတယ်။
အန်င်္တီမမ စာအုပ်မှာလည်း..သားရဲ့အမှတ်တရ လေး ပါမသွားဘူးပေါ့ ။
နောက်တစ်ပွဲ ….မှာ… ပါစေရမယ်.။
လုံမလေး သို့ အန်စရာအတုံးလေးကို ဒုက္ခပေပးပီးဝယ်ခိုင်းလိုက်ပမယ် အန်တီဒုံ
နောက်တခေါက် တွေ့ဆုံပွဲ ယခုပွဲမှ အမှတ်တရ (၁) စာအုပ်များ ရောင်းဖို့ ရှိမရှိသိချင်ပါတယ်..
ကျနော် အရမ်း ၀ယ်ချင်ပါသည်။ သူများတွေလို ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နံရိုးတွေမရှိတော့..
ပြန်ရောက်မှလူကိုယ်တိုင်ပဲ ၀ယ်ရမလိုဖြစ်နေလို့ပါ။။ ကိုယ့်ပို့စ်လေး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရတော့
ဘ၀မှာ အမှတ်တရအဖြစ် တစ်သက်လုံးသိမ်းချင်သလို ဘော်ဒါတွေလည်း ကြားချင်လို့ပါ..
အဲ့လာ.. အဲ့လာ.. ဖြေပေးပါဂျာ..
ကိုရင်တွက် ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ၁ အုပ်ချန်ထားပါမယ်။
ဟုတ်.. ကျေးဇူးပါ.. အာတီဒုံ….
တာဝန်ကျေ ပြီးကြောင်းသတင်းပို့ပါတယ် .. နှစ်အုပ် AK မှ ၀ယ်ပြီးပါကြောင်းနှင့် တစ်အုပ် ကြားလူ ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်မိ၍ နောက် တစ်အုပ် ရွာသူ တစ်ဦး အတွက် ထပ်မံ ၀ယ်ပေးရပါမည်။
ခုလည်းအပြာပဲလေ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အမောင်ကြောင်ရဲ့။
လက်တလောမှာ မန်းလေးရောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်….
ဘကြီးပေါက်ကို ဆက်သွယ်ပြီး ၂ အုပ်လောက်တော့ ဈေးဆစ်ပြီး ၀ယ်ယူအားပေးပါမည်….
တစ်အုပ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါ… တစ်အုပ်က
ကျနော်ဖတ်ပြီး… ရွာသူအလှပဂေးများ၏ ပုံများကို ကြည့်ချင်လို့ပါ……..
ဒီနေ့ဆိုင်မှာ လာဝယ်တဲ့လူတစ်ယောက်က သူစာဖတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ခင်ခင်ထူးစာတွေအကြောင်းပြောလို့ စာဖတ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာအုပ်လေး မြည်းကြည့်ပါလား။ အင်တာနက်တက်ရင် ဒီဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်ပါလား လို့ ပြောတာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်သွားတယ်။
စာရေးသူနဲ့ စာအုပ်စီစဉ်သူတွေတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ။
ဆိုဒ်ကို ကြော်ညာခ ပေးပါ။
1-8-2013 နီကိုလပ်စက တစ်အုပ်ဝယ်သွားပါ၏
ဖရဲသီး ဘဲဥ မောင်ပေ ဖိုးထောင် ဖောဂိုင်း
မန်းလေးက ကိုကျော်ထိုက်ကလဲဝယ်မယ်လို့ဖုန်းဆက်ချိန် ကျနော်မအားတော့
တကယ်တော့ ရွာထဲက Active Member တွေထဲ မှာ မန်းသူ/မန်းသား အင်အား မနည်းဘူးနော်။
ယနေ့ ကိုကျော်ထိုက်မှ (၂)အုပ်ဝယ်ပါမည်။
နောက် ရွာသားမဟုတ်သူ ဖေစ်ဘုတ်မှ ကျနော်မိတ်ဆွေ မြန်မာသံလေးတွေနားထောင်ကြမယ် အဖွဲ့မှ ကိုဆန်း (ခေတ္တပြင်ဦးလွင်)မှ
ရွာမှာ လုပ်မည့်အလှူထဲတွင် ထည့်ရန်ဟု ကြိုတင်လှူဒါန်းထားပါသည်။
ယနေ့ ရွာသူ မနှင်း (မန္တလေး) ရခို်င်အလှူပွဲတွင်အလှူငွေပါဝင်ထားသူက
စာအုပ်တစ်အုပ် ၀ယ်ယူ အားပေးထားပါသည်။
ပန်ထူးသာ သင်္ကန်းဆိုင်နှင့်နီးပါသဖြင့် နောက်နေ့တွင်သွားရောက်ဝယ်ယူအားပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးး
အန်တီ ရဲ့ဒီပိုစ့်ထဲက…
စာအုပ် နောက်ကျောဘက် ပုံလေးတစ်ပုံ..
ကျွန်တော်ရဲ့ …အထူးခြားဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ညွှန်းဆိုဝေဖန်ခြင်း
http://myanmargazette.net/183283 မှာ.. ယူသုံးထားမိပါတယ် ။
ပြီးတော့.. ကျွန်တော့် ပိုစ့် က စာအုပ် ပုံကို ကလစ်လိုက်ရင်..
အန်တီ့ ရဲ့ဒီပိုစ့်ကို..ရောက်လာအောင်.. လင့်ခ်လေး ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ဒါလေး.. ခွင့်လာတောင်းတာပါ ။
( အမှန်က.. လုပ်ထားပြီးပြီ ။ )
ယနေ့တွင် ဤသူအတွက်လက်မှတ်ထိုးပေးထားကြသော စာအုပ်တအုပ်ကို လက်ခံရရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. ပေးပို့သူ…သယ်ဆောင်လာသူတို့ကို.. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း… မှတ်တမ်းတင်ပါသည်ခင်ဗျ…
တော်တော်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ထားသမို့.. နောက်ကို စာအုပ်ထုတ်ရင် အပ်ရကောင်းမလားလို့…
ရွာထဲက စာကောင်းပေမွန်တွေကို ထပ်ထုတ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ဘဲ။
ရွာသူားတို့ရေ ဟောဒီမှာ စပွန်ဆာ ရပါပြီဗျို့။
အဲဒါဆို “ သဂျီး ” လို့ခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော်ာ်ာ်ာ်?????
FB ပေါ်မှာ လုပ်သလို ပြန်တင်ရင်း ပိုက်ပိုက်နှီုက်သာ။
သူကြီးကို အားမနာပေမယ့် သမီးတော်လေး မျက်နှာက ရှိသေးးးကိုးးး။